Stretch Table Covers Factory | I-China Stretch Table Covers Abenzi nabahlinzeki
Nweba Amatafula Wethebula nge-Open Back
Uhlobo lwendwangu yetafula, olwaziwa nangokuthi ikhava yetafula elula, ilungele noma yimuphi umcimbi okhethekile, umbukiso wezohwebo, ihholo lomhlangano noma lombukiso. I-back hollow-out inikeza ukuvuleka ngemuva ukuze ukwazi ukuhlala ngemuva kwetafula lakho ngaphandle kokuphazamisa ikhava yetafula.
I-Round Stretch Table Topper
Itopper yetafula eliyindilinga liyisinqumo esihle sokwenza itafula lakho lomcimbi libukeke licijile futhi lihle Futhi, ingasetshenziselwa ukuvikela itafula lakho phezulu ekugqashukeni kwansuku zonke, ikakhulukazi ukuhambela emuva naphambili emicimbini nasemibonisweni yezohwebo.
Ukuza nosayizi ohlukahlukene, okokufaka itafula lokwelula ngokwezifiso kuyindlela engabizi kakhulu yokwenza isibonisi setafula elikhangayo.
Amakhava Wethebula Lokuwela Lokunqamula
Ukuguquguquka kwalesi sembozo setafula lokulula kuzokusiza ukuthi ushintshe ukubukeka kwamatafula akho ngokushesha ngaphandle kokuthenga imikhiqizo eyengeziwe. Izembozo zethebula lokuwela ngaphezulu zilungele imibukiso ehlukahlukene, izingqungquthela, izingqungquthela nemibukiso yezohwebo ngoba lawa mathebula ayingqayizivele anecala eliguqukayo njengoba impahla enwetshiwe idonswa phansi ukumboza imilenze yetafula.
I-Stretch Table Covers Back nge-Zipper
Indwangu yetafula elihle le-spandex ifaka i-backback ngokuvalwa kwe-zipper, ikusize ekwazini ukuba nesikhala sokugcina esingezansi ngaphansi. Uma ukhathazeka ngokuphepha emibonisweni noma ezindaweni eziminyene, itafula le-spandex limboza ngoziphu ongemuva kuphakanyiswa ukuthi kube yisinqumo esingcono ngoba ungakhiya izinto zakho ezibalulekile ngaphakathi.
Zenziwe ngezindwangu zekhwalithi ze-polyester ezinwebekayo ezinhlobonhlobo zemibala, amakhava etafula ayindilinga afaka ukuheha okukhangayo, kobungcweti ematafuleni womcimbi ngenkathi unikeza indawo ekahle yokuqhakambisa ibhizinisi lakho ngokunyathelisa okwenziwe ngokwezifiso okubonisa ilogo yakho noma umyalezo wokukhangisa ukudala okungeziwe umthelela edokodweni lakho.
Lolu hlobo lwesembozo setafula le-spandex lulungele imicimbi ekhethekile, imihlangano, imibukiso yezohwebo, izindlu ezivulekile, imibukiso kanye nemikhosi yomuntu siqu. Yenziwe ngezindwangu ezisezingeni eliphakeme ze-polyester ezinhlobonhlobo zemibala, amakhava wetafula lombukiso wezentengiselwano afaka ukuheha okukhangayo, kobungcweti ematafuleni akho angakhombisa ilogo yakho noma imilayezo yokukhangisa ukudala umthelela owengeziwe edokodweni lakho.